IIMPENDULO | Zhejiang Yongkang Qokelela Ubunzima Izixhobo Co., Ltd.
Ndingayenza imveliso yam yohlobo? Ndingasifumana njani isampulu?
Ewe, ngentando yinto esiyisebenzisayo, ungasithumela uyilo, emva koko siya kulungiselela ukuvelisa isampuli emva kokuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe.
Ngaba unaso isitokhwe sezo mveliso kuluhlu lwewebhusayithi?
Kuba uninzi lweemveliso zethu zenziwe ngokombala wabathengi, uphawu, ukupakisha njalo njalo, kwimeko ezininzi, asigcini uluhlu lweempahla.
Ngaba ndingalwenza utshintsho kuyilo emva kokuba iodolo iqinisekisiwe?
siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuphucula uyilo ngokwengcinga yakho entsha ngaphambi kokuba imveliso yobuninzi iqale. Nceda uqaphele ukuba kufuneka usixelele ngaphambi kwemveliso.
Zeziphi iinkqubo eziza kubakho ukuba ndinemibono yokwenza into yokwazisa iimveliso zam kuphela?
sidinga inkxaso yakho eyi-100%. Inkqubo yethu yenkonzo ngoluhlobo: 1. Sithumele uyilo lwakho; 2. Iinkcukacha zeprojekthi; 3.prototyping kunye nemveliso. 4. Uhlolo kunye nezothutho. Kufuneka sinxibelelane nawe nangaliphi na ixesha. Iinkcukacha ezithe kratya malunga nenkqubo nceda unxibelelane nathi nanini na.
Ngaba uyabonelela ngenkonzo yoyilo ukuba ndinoluvo nje kodwa andiyilwanga.
Ewe singenza uyilo lwasimahla kuwe ngokoluvo lwakho, kodwa kuya kufuneka ubhatale malunga ne- $ 50-100 yoyilo lwefuthe le-3D xa kufuneka.Ukuba unawo nawuphi na umbuzo, nceda uzive kulula ukunxibelelana nathi!
Ulawula njani umgangatho weemveliso?
Athini amagama akho okuhlawula?
Kukho ikakhulu iintlobo ze-3 zemigaqo yokuhlawula eyamkelweyo kwaye yamkelekile. Kwimali encinci njengeesampulu kunye nentlawulo yoyilo, samkela iT / T kunye nomanyano lwentshona; Ukuhlawulwa kwemveliso eninzi, sigcina i-T / T (i-30% idipozithi kunye ne-70% eseleyo); Imali engaphezulu kwe-150,000USD inokuhlawulwa nge-L / C.